အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ - ဒိုးမယျ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတိရစရာနေ့တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲက တစ်နေ့ကတော့ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ဖက်ထုပ်ချစ်သူများအတွက်ကတော့ အကောင်းဆုံးနေ့လေးပေါ့နော်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပုံစံအမျိူးမျိူးနဲ့ အရသာ အမျိူးမျိူးရှိတဲ့ ဖက်ထုပ်တွေရှိကြပါတယ်။
ဖက်ထုပ်ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဂျူံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖက်ရွက်ထဲမှာ အရသာစုံနှပ်ထားတဲ့ အသား (သို့မဟုတ်) အသီးအရွက် တွေကို ထည့်ပြီးပေါင်းထားတာပါ။အောက်မှာတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ တို့ကိုရေးသားတင်ပြထားပါတယ်။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ဆိုတာ ဘာလဲ?
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာစားသုံးကြတဲ့ ဖက်ထုပ်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကျင်းပ ကြတာပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ ကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပရယ်လမှာ နယူးယေက်မြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ TMI အစားအသောက် ဖြန့်ချီရေးအုပ်စုက အဆိုတင်သွင်းခဲ့ ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြက္ခဒိန်ကတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ကို နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့မှာ ကျင်းပဖို့ သတ်မှတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ကိုကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖက်ထုပ်စားသုံးတဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများကို လူပိုသိစေလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ကိုပွုလုပျဖို့ ဘယျသူတှကေ စတငျ စဉျးစားခဲ့တာလဲ?
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ ကို TMI အစားအသောက် ဖြန့်ချီရေးအုပ်စု မှ ဂျိူးဆက်တန်း နဲ့ တယ်ရီတန်း တို့က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ထုပ်နေ့ ကိုပြုလုပ်ဖို့ စတင်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ မှာ ဘယျလိုကငျြးပလရှေိ့ကွလဲ?
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူများဟာ မိမိတို့ နိုင်ငံရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဖက်ထုပ်များကို ပြုလုပ်ကြပြီး ကို့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း နှင့် ဘ၀လက်တွဲဖော် တို့နှင့် စားသုံကြပြီး ဓာတ်ပုံများရိုက်ကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တင်ကြပါတယ်။
ကဲ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ရောက်ရင် ဖက်ထုပ် စားဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်။
ကမ်ဘာပျေါမှာ သတိရစရာနတှေ့ေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
အဲ့ဒီထဲက တဈနကေ့တော့ စကျတငျ
ဘာလ ၂၆ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပလရှေိ့တဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနလေ့ညျး အပါအဝငျဖွဈပွီး ဖကျထုပျခဈြသူမြားအတှကျကတော့ အကောငျးဆုံးနလေ့ေးပေါ့နျော။
နိုငျငံတိုငျးမှာ ပုံစံအမြိူးမြိူးနဲ့ အရသာ အမြိူးမြိူးရှိတဲ့ ဖကျထုပျတှရှေိကွပါတယျ။
ဖကျထုပျဆိုတာကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး ဂြူံနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ ဖကျရှကျထဲမှာ အရသာစုံနှပျထားတဲ့ အသား (သို့မဟုတျ) အသီးအရှကျ တှကေို ထညျ့ပွီးပေါငျးထားတာပါ။အောကျမှာတော့ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ရဲ့သမိုငျးကွောငျးတှနေဲ့ ဖွဈပျေါလာပုံ တို့ကိုရေးသားတငျပွထားပါတယျ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ဆိုတာကတော့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာစားသုံးကွတဲ့ ဖကျထုပျတှကေို ဂုဏျပွုတဲ့ အနနေဲ့ ကငျြးပ ကွတာပါ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ကို ၂၀၁၅ခုနှဈ ဧပရယျလမှာ နယူးယကျေမွို့မှာ အခွစေိုကျတဲ့ TMI အစားအသောကျ ဖွနျ့ခြီရေးအုပျစုက အဆိုတငျသှငျးခဲ့ ကွတာပါ။ ဒါပမေဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာပွက်ခဒိနျကတော့ အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနကေို့ နှဈစဉျ စကျတငျဘာလ ၂၆ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပဖို့ သတျမှတျခဲ့ ကွပါတယျ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနကေို့ကငျြးပရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ ဖကျထုပျစားသုံးတဲ့ နိုငျငံတျောတျောမြားမြားကို လူပိုသိစလေိုခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ကို TMI အစားအသောကျ ဖွနျ့ခြီရေးအုပျစု မှ ဂြိူးဆကျတနျး နဲ့ တယျရီတနျး တို့က အပွညျပွညျဆိုငျရာဖကျထုပျနေ့ ကိုပွုလုပျဖို့ စတငျစဉျးစားခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာတဈဝှမျးက လူမြားဟာ မိမိတို့ နိုငျငံရဲ့ သကျဆိုငျရာ ဖကျထုပျမြားကို ပွုလုပျကွပွီး ကို့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယျခငျြး နှငျ့ ဘဝလကျတှဲဖျော တို့နှငျ့ စားသုံကွပွီး ဓာတျပုံမြားရိုကျကာ ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ တငျကွပါတယျ။
ကဲ ပရိသတျကွီးတို့လညျး စကျတငျဘာလ ၂၆ ရကျနေ့ ရောကျရငျ ဖကျထုပျ စားဖို့ မမကွေ့နဲ့နျော။